Maamulka Atletico Madrid Oo Go'aan Ka Gaadhay Haddii Ay Barcelona Wada Xaajood Kala Yeelanayaan Xidiga Gadoodsan Ee Antoine Griezmann Iyo Haddii Ay Talaabo Kale Qaadayaan. - Gool24.Net
Maamulka Atletico Madrid Oo Go’aan Ka Gaadhay Haddii Ay Barcelona Wada Xaajood Kala Yeelanayaan Xidiga Gadoodsan Ee Antoine Griezmann Iyo Haddii Ay Talaabo Kale Qaadayaan.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona ayuu khilaaf markale kaga dhex curtay xidiga reer France ee Antoine Griezmann kaas oo ay sanad ka hor maamulka kooxda Atletico Madrid ay arintiisa uga dacwoodeen xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA.
Iyada oo Antoine Griezmann uu dheg jalaq u siin waayay amarkii maamulka kooxdiisa Atletico Madrid ee loogu sheegay in uu xarunta tababarka ku soo laabto waxaa sii kordhay khilaafka u dhexeeya Griezmann iyo kooxdiisa si la mid ah colaada ay maamulka Atletico u hayaan Barcelona.
Maamulka kooxda Atletico Madrid ayaa go’aan adag ku gaadhay in ayna ka soo dhaqaaqin halkii ay ka taagnaayeen arinta Antoine Griezmann isla markaana ayna wax wada xaajood ah la furin kooxda Barcelona.
Maamulka Atletico Madrid ayaan gadoodka Antoine Griezmann iyo seegitaanka tababarka aan wali ugu soo dabcin Barcelona oo doonaysay in ay wada xaajood wax ku dhameeyaan iyaga iyo maamulka kooxda Atletico Madrid.
Arinta ugu wayn ee ay hadda isku khilaafsan yihiin Barcelona iyo Atletico Madrid ma aha in Antoine Griezmann uu ka baxo kooxda balse waa in Barcelona ay hal mar miiska saarto lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo July 1 isku badashay 120 milyan yuro.
Laakiin ujeedada Barcelona ka lahayd wada xaajoodka ay Atletico Madrid la furtay ayaa ahaa in lacagta heshiiska Antoine Griezmann lagu burburin karo ay dhamaanteed bixiyaan balse loo ogolaato in ay qayb-qaybo kala waqti ah bixiyaan.
Wargayska Marca ee dalka Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in maamulka kooxda Atletico Madrid ay go’aan ku gaadheen in ay ku sii adkaystaan in ayna wax wada xaajood ah la galin Barcelona taas oo maamulka Camp Nou ku riixaysa in ay hal mar bixiyaan lacagta lagu burburin karo heshiiska Griezmann.
Barcelona ayaa laba kaadh oo kala duwan ku ciyaaraysa waana heshiiska ay ku doonayso Antoine Griezmann iyo waliba isku dayga ay Neymar Jr kooxdeeda ugu soo celinayso, waana sabab ayna u doonayn in ay ku deg degaan bixinta lacagta heshiiska Griezmann lagu burburin karo.
Antoine Griezmann ayaa u cadaysan hab dhaqanka kooxdiisa Atletico Madrid maadaama oo la ogaaday in hore loogu balan qaaday in haddii uu kooxda ka baxayo sida ugu fiican looga caawin doono bixitaankiisa kadib markii uu sanad ka hor heshiis cusub saxiixay.
Si kastaba ha ahaatee, khilaafka ay maamulka Atletico Madrid kula jiraan Antoine Griezmann iyo Barcelona ayaa wali halkiisa sii taagan.